Marine sy LNG-Marine ary LNG-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
Home>Applications>Marina sy LNG
Raha tsy misy ny fantsom-panafody dia azo entina sy tehirizina tsara ny hydrocarbons gazy aorian'ny fanovana azy ireo ho toy ny toetran'ny ranoka.
Ny lasantsy solika dia mihalefaka amin'ny maripana manodidina amin'ny famatrarana amina bara vitsivitsy (LPG), fa ny methane (gazy voajanahary) kosa dia mila hafanaina amin'ny -160 ° C ka lasa LNG.
Ny valva ho an'ny "maripana ambany" dia ireo napetraka ao amin'ny toetr'andro arctic na mety hipoitra amin'ny depressurization entona malaky (fipoahana) ary amin'ity tranga ity dia mety "ampandehanana na tsia" amin'ny toe-javatra mangatsiaka ho fiasan'ny lamina napetraka.
Ny valizy "Cryogenic" dia mazàna mikarakara gazy liquefied, izay toa ny LNG dia mila miasa amin'ny maripana ambany be.
Ny valizy cryogenika mipetraka roa dia mitaky fandaminana fipetrahana manokana izay tsy manara-penitra ao anaty lava-bato ary manome antoka ny fahombiazan'ny famehezana any ambany.
Titan dia mamokatra valisoa cryogen Gate, Globe, Check, Ball & Butterfly ary valves control ihany koa natao ho an'ny BS-6364 miaraka amin'ny fitsapana be amin'ny -196 ° C (Helium notsapaina tao anaty fandroana Nitrogen Liquid).
Ny fahaiza-manao fanandramana Titan ho an'ny valves LT & CRYO dia lehibe (singa fitiliana maro, efa natolotra NPS 24 ”).
Noho ny traikefa lehibe sy ny fampandrosoana maharitra natoky ny departemanta R&D misy fotodrafitrasa fitiliana mifandraika amin'izany izahay dia afaka manome antoka ny fahombiazana azo antoka ho an'ny tsena LNG feno izay misy, ny fizotran'ny fifangaroana (eny ivelany koa toy ny FLNG), ny fitehirizana, ny fitaterana amin'ny alàlan'ny ranomasina ary ny famotehana indray ao toerana misy ny mpampiasa farany.
Ny fizotrany na ny rindranasa izay misy gaspes liquefied indostrialy hafa (oh: Ethylene) dia tafiditra ao anaty fahaiza-manao tena izy.